Kulan Dhexmaray Madaxda ONLF iyo Dowlada Eritrea. | ogaden24
Kulan Dhexmaray Madaxda ONLF iyo Dowlada Eritrea.
Kulan Dhexmaray Madaxda ONLF iyo Dowlada Eritrea
Maanta oo ay taariikhdu tahay 30 November 2018, waxaa magaalada Casmara ee caasimada dalka Eritrea ku kulmay madaxda ugu sarraysa Jabhadda Waddaniga Xoraynta Ogaadeenya (JWXO) iyo madaxwaynaha waddanka Eritrea. Dhinaca JWXO waxaa hoggaaminayay guddoomiyaha JWXO Admiral Maxamed Cumar Cismaan, waxaana ka mid ahaa Xoghayaha Guud ee JWXO mudane C/raxmaan Sh Mahdi iyo madax kale oo ka tirsan Guddiga Fulinta.
Kulankan waxaa lagu qaadaa-dhigay arrimo muhiim ah oo khuseeya gobolka Geeska Afrika, gaar ahaa arrimaha Ogaadeenya iyo kaalinta ay dowlada Eritrea ka ciyaari karto dhammaystirka heshiiskii dhawaan dhexmaray JWXO iyo dowlada Itoobiya. Dowlada Eritrea ayaa ballanqaaday inay sii wadi doonto taageerada qadiyada Ogaadeenya, isla markaana ay ka shaqayn doonto sidii gobolka Geeska Afrika looga hirgelin lahaa cadaalad iyo nabad ku wada-noolaansho dhexmara dadyowga kala duwan ee Geeska ku dhaqan, ee Soomaalida Ogaadeenya ay ka mid yihiin.
JWXO waxay madaxwaynaha Eritre Isiyas Afwerki iyo shacabka Eritrea uga mahadacelisay taageeradii hiil iyo hooda ahaydee ay la garab taagnaayeen Jabhadda iyo shacabka Ogaadeenya.
Xubnaha Guddiga Fulinta ee JWXO waxay sidoo kale maanata la kulmeen madax kale oo tirsan dowlada Eritrea iyo xisbiga talada dakla haya, waxayna ka wadahadleen arrimo labada dhinac khuseeya iyo sii xoojinta xidhiidhka u dhexeeya JWXO iyo dowlada Eritrea.